Sida timaha looga jaro guriga - Talooyinka Quruxda ee Ragga Quruxda Badan | Ragga Caqliga leh
Waxaa laga yaabaa inaad ka mid tahay dadka lagu dhiirrigeliyay inay xirfado cusub guriga ku qabtaan. Waxaa ka mid ah dhammaan baahiyahaas oo aynaan awoodin inaanu ku qabanno xabsiyada iyo timo jarista guriga ayaa ka mid ahayd caqabadaha in rag badani ay doonayeen inay gacmahooda ku qabtaan.
Timaha ragga ayaa aad uga adag marka loo eego tan dumarka, iyada oo loo malaynayo in goyntu ay tahay in ay noqoto qaab gaaban oo weji leh. Mana jiraan wax ka wanaagsan gacmo -xirfadeedka si looga tago timo aan iin lahayn, in kasta oo gacmaheena sidoo kale. waxaan heli karnaa hagaajinkan yar.
Sideen timaha guriga ugu goyn karnaa?
Hadda waxaa jira casharro aan tiro lahayn oo ku jira internetka waxaanna gacanta ku haynaa siyaabo badan sideen timaha u xiiri karnaa xitaa leh qaabab iyo qaabab kala duwan. Shaki kuma jiro wax walba Waxay ku xirnaan doontaa dabacsanaanta gacanta ee mid kasta, laakiin waxaan kuu xaqiijin karnaa in haddii aad isku daydo inaadan waxba waayin, ugu dambayn wax walba waxay leeyihiin xal.
Diyaarso timahaaga ka hor jarista: Hubi dhammaan agabyada aad isticmaali doonto si aad uga bilowdo jariddaas: maqas, shukumaan, alaab aad timaha ku nadiifiso, shanlo iyo mandiil si aad timaha u jarto.
Tallaabada koowaad: ka hor intaadan timahaaga u diyaarin goyntaas waa inay nadiif ahaataa oo qoyaan noqotaa. Mid waa inuu timahaaga dhaq oo leh shaambo iyo qaboojiye, in si fiican loo biyo raaciyay oo si tartiib ah ugu qalaji tuwaal. Timaha waa inay qoyan oo aad u shanleyn si ay u awoodaan in ay u shaqeeyaan si ka sii fiican.
Tallaabada labaad: haddii aad leedahay timo aad u dheer waa inaad gebi ahaanba kala fur, Khasab ma aha in la sameeyo wax gunti ah si looga hortago in la jabiyo shanlada markaan goynayno. Haddii timuhu qalalaan, mar kale qoy oo tuwaalka ka saar qoyaanka xad -dhaafka ah.
Tallaabada saddexaad: waxaan mar kale timaha ku shanleeynaa oo aan hor istaagnaa muraayad, iyada oo marin loo heli karo saxanka. Waa lama huraan inaad haysato muraayad kale meesha aad ka arki karto dhabarka iyo dhinacyada madaxa.
Tallaabada afaraad: waa inaad timaha u qaybisaa dhawr qaybood. Haboon waa isku day inaad timaha u shanlayso dhinaca, oo ku calaamadinaya xarriiq isdhaafsan, mar haddii aan bilaabi doono inaan jaray dhabarka iyo dhinacyada.
Tallaabada shanaad: Waxaa jira casharro ka bilaabma timaha timaha sare, laakiin waxaad sidoo kale isku dayi kartaa dhinacyada sida aan halkaan ku tilmaami doono. Waa inaad mashiinka hoos u dhigtaa oo aad bilowdaa hoos ka goynaya. Waa inaad si tartiib ah u foorarsataa makiinada si aad u abuurto khalkhalka isku xirka sare. Ku soo celi goynta qaybtaas si aad u hubiso in si fiican loo qeexay.
Tallaabada Lixaad: waxaan ka jarnay dhabarka ama dhabarka madaxa. Waa inaad sidaa si la mid ah samaysaa, laga bilaabo hoos ilaa sare. Haddii aad haysato muraayad waxay tallaabadan ka dhigi kartaa mid aad u fudud, laakiin waxaad codsan kartaa caawimaad si qof kuu caawiyo.
Tallaabada toddobaad: madaxa sare ayaan ka jarnay. Waxay kuxirantahay dhererka timahaaga, waad dooran kartaa isticmaal qurxiyo ama maqas. Haddii aad leedahay timo aad u dheer waa inaad isticmaashaa maqas. Waa inaad gacmahaaga ku soo qaadataa timo fara badan iyo ku kala bixi farahaaga dhexdooda, Waa inaad qaadataa qaybo timo ah oo u dhigma xagga hore ee xariiqa timaha. Waa inaad tagtaa goynta dhererka la rabo iyo sida loo gooyo, kormeer haddii loo baahdo in badan oo la gooyo.
Talaabada sideedaad: sare ayaa sidoo kale lagu jari karaa mandiil. Waxaan u adeegsan doonnaa inaan jarno timo aad u gaagaaban oo leh saamayn badan oo xiira iyo meesha ay aad uga fiicnaan doonto isticmaalka maqaska. Haddii waxa aad doonaysaa ay yihiin saamayn duushay oo korka ku haysa madaxa intiisa kale, waa inaad isticmaal heer sare ka badan wixii aad dhinacyada u adeegsanaysay.
Sagaal tallaabo: waa inuu isbarbar dhig dhinaca dhinacyada madaxa korkiisa. Si loo simo ama loo madoobaado, waxaan mar kale isticmaali doonaa mandiilkii oo si aayar ah ayaan u shaqayn doonaa aaggaas. Waa inaad isticmaashaa heer dhexdhexaad ah oo baaba'aya in yar inyar xariiqa labada aag kala saara.
Tallaabada XNUMX: Tallaabadan, waxay ku hadhay oo keliya in la hubiyo dhinacyada oo la hubiyo in wax waliba si fiican isugu habboon yihiin si aan mar dambe loo dhammayn. Dhinacyada madaxa waa inay ahaadaan ahaadaan kuwo isku mid ah oo isku dherer ah.
Tallaabada kow iyo tobnaad: Waxaan hagaajin doonaa bararka dhinaca. Qeybtan waxaa lagu samayn karaa iyada oo la mariyo si toos ah ama makiinada lafteeda. Waad bixi kartaa googaalaysi gaaban ama gubasho dheer, taasi waxay ku xirnaan doontaa dhadhankaaga. Oo si aad u dhammaystirto waa inaad qoorta sare qoorta ku mari, intee le'eg ayay bilaabmaysaa timo -jaridu. Si tartiib tartiib ah wax u goyn oo aad uga gaabso marka aad ugu soo dhowaato naaska qoortiisa.
Ha iloobin taas waxay qaadataa farsamo iyo xirfad. Waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u dhammayn markii ugu horreysay, laakiin waad ogtahay in waqti iyo tijaabooyin badan oo badan aad abuuri karto timo jaban Si aad u sii wadato talooyinka quruxda waxaad akhrin kartaa casharradeenna "sida garka loo xaqiroThesida loo qeexo”. Ama haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ogaato timo -jaraha casriga ah ee aad loo xirto, soo gal isku xirkaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida timaha loogu jaro guriga